Isambrela sikhusela njani kubushushu
ngomphathi ku 21-08-19
Isambrela sikhusela njani kubushushu Siyayazi kwindawo yokuqala, isambrela siphuma e-china, senza ngephepha kunye noqalo. Ukuphuculwa ngephepha leoyile ukwenza ngathi kunemvula, kwaye ilanga akukho lula kangako ngephepha leoyile, yiyo le ndlela isambrela sisikhusela kubushushu. Emva kokuyila, abantu ...
Yeyiphi i-aluminium engcono okanye i-umbrella yentsimbi?
ngomphathi ku 21-08-18
Yeyiphi i-aluminium engcono okanye i-umbrella yentsimbi? Ukuba ufuna ukwazi ngokuthelekisa ialuminiyam kunye nesambrela sentsimbi, kuya kufuneka wazi ngakumbi ngeenkcukacha ezimbini. I-Aluminium: Eyona nto ihlala ixesha elide kwaye ibhetyebhetye ekukhetheni izinto zepali, ialuminium ayirusi irusi kwaye yomelele kakhulu. … Intsimbi: St ...
Njani umgangatho weambrela eTshayina
ngomphathi ku 21-08-13
Yeyiphi ipesenti yeziambrela zehlabathi ezenziwe eTshayina? Ngo-2013 i-China yayingoyena mthengisi mkhulu wehlabathi kwii-ambrela kwihlabathi lonke eliqikelelwa kwi-92% yesabelo sehlabathi seambrela. Ubelgium kunye nejamani zimela ezona zikhula ngokukhawuleza kwizambrela kwihlabathi liphela ukusukela ngo-2008-201 ...
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga nokugonywa kwe-COVID-19
ngomphathi ku 21-08-12
Ngaba kukhuselekile ukufumana isitofu sokugonya se-COVID-19? Ewe. Zonke izitofu ezigunyazisiweyo nezinconyelwayo ze-COVID-19 zikhuselekile kwaye ziyasebenza, kwaye i-CDC ayikhuthazi isitofu sokugonya esinye ngaphezulu kwesinye. Esona sigqibo sibalulekileyo kukufumana ugonyo lwe-COVID-19 ngokukhawuleza. Ugonyo olusasazekileyo ukugxeka ...
Uyakha njani iambrela yakho
Uyakha njani iambrela yakho uphawu lweambrela ligama elinye kunye nelogo ekwiimveliso ezimbini okanye ezingaphezulu ezinxulumene neemfuno ezahlukeneyo. Umzekelo, uHeinz luphawu lwesambrela kuba igama likwiintlobo ngeentlobo zeemveliso ezinje nge ketchup, isardard, iviniga, iimbotyi nokunye. Iimpawu zeambrela ...
Isebenza njani iSambrela
Isebenza njani iSambrela? Icandelo ngalinye leambrela liyimfuneko ukuze lisebenze. Imbaleki inyuka isolula i-stretcher, ethi yona ityhalele phezulu ngokuchasene neembambo. Oku kudala amandla awolule ngokupheleleyo umthi, kwaye ngesixhobo sokutshixa, uyikhusele endaweni yayo. Jonga apha ngezantsi ...
Ungayikhetha njani i-bubble ecacileyo isambrela
ngomphathi ku 21-08-06
Cacisa iiambrela ziqaqambile kuko konke ukubonakala okujikelezileyo. Ikwabizwa ngokuba bubble, idome okanye iintaka kwikheyi yeentaka, singumenzi weambrela eXiamen China. Ke unokufumana iimfuno zomzi-mveliso, nkqu nesambulela esicacileyo somntu. Uncedo lokusebenzisa isambrela esicacileyo kwezi meko kukuba awuyi ...
Eyona ndawo ilungileyo kunye nesinqumlayo isambrela yabantwana
Imvula ayiyi kumisa umntwana wakho ukuba angonwabi xa eneesambrela ezisemagqabini. Kodwa ungabanceda njani abantwana ukuba bafumane isambrela esisikiweyo kunye nomgangatho? Kuqhele ukuba kufuneka ukhethe phakathi kwefashoni okanye umsebenzi. Ngoku, kukho izinto ezithandekayo, ezimnandi, ezamkelwe ngumama zabantwana abafumana ...
Zithini iiambrela zesiko?
ngomphathi ku 21-08-03
Ukunika izipho Yenza isipho esifanelekileyo sokuzalwa, isipho sesikhumbuzo, okanye izipho kubathengi bakho abathembekileyo. Ukunyuswa kweshishini Beka igama lakho leshishini kunye nelogo kwiambrela yesiko kunye nokutsala umdla kunye nabathengi abatsha naphi na apho uya khona. Ukuzibonakalisa kuyilo lwesambrela sakho esingaqhelekanga kunye ...
Uyikhetha njani i-Umbrella yePatio yakho
ngomphathi ku 21-08-02
Ungayikhetha njani i-Umbrella efanelekileyo yePatio yakho Khusela usapho lwakho kwimitha yelanga engqindilili, khusela amehlo akho kwilitha lasemva kwemini, kwaye ufumane impumlo kubushushu behlobo obugqithisileyo konke ngokongezwa okulula kwesambrela. Funda esi sikhokelo ukuze ufumane isambrela esifanelekileyo kwi-spa yakho ...
Impembelelo yeCovid-19 yonzakele kwihlabathi liphela. Siyathemba ukuba wonke umntu angayigubungela le nto, kwaye abe nekamva eliqaqambileyo lomnyama. Siyazi ukuba isambrela somnyama yeyona nto idumileyo kwaye ishushu ethengisa kwimarike, ingakumbi abantwana. Kwaye sinemigca evulekileyo yemvula kulo nyaka, ukuze sikwazi ukuvelisa isambrela somnyama kunye ...
Iimbrela ezitshisayo zangaphandle zasehlotyeni
Siyazi ngeentsuku zehlobo iiambrela ziyimfuneko. Nokuba yeyiphi na imini eshushu yehlobo, okanye rhoqo imvula engafumanekiyo kufuneka sibe nesambrela. Kwaye ukuba ufuna ukuya elwandle nosapho lwakho, isambrela saselwandle okanye iintente lolona khetho lufanelekileyo. Singahle senze isambrela elunxwemeni ngamanqatha, nditsho nokuprinta ...
Iisambrela zesiko lesiqhelo, Isambrela soKhuseleko oluNgenawo umoya, Ukusongelwa kwangaphandle, Isambrela esenzelwe wena, Isambrela esisesikweni, Umbrella wemvula,